Any Antsiranana: andiany faha-13 ny « i’Trôtra » | NewsMada
Any Antsiranana: andiany faha-13 ny « i’Trôtra »
Toy ny tamin’ny roa taona nifanesy, mbola horaisin’ny any Antsiranana, ny ao amin’ny Alliance française any an-toerana, raha ny marina kokoa, ny andiany faha-13 amin’ny « Festival i’Trôtra », sehatra iray enti-manatsara ny fahaiza-manao eo amin’ny dihy ankehitriny sady fotoana hisarihana ny rehetra hankafy ity zavakanto ity, amin’ny alalan’ny fampisehoana isan-karazany.
Manasa matihanina maro, avy any ivelany, ny mpikarakara, isan-taona, hizara ny traikefany sy haneho ny talentany. Ho an’ny androany, andro voalohany sady fanokafana amim-pomba ofisialy ny « i’Trôtra », hiavaka ny fandraisana anjaran’ny kaompania Ioannis Mandafounis, avy any Soisa sy ny kaompania Haja Saranouffi.
Hitohy eo anoloan’ny La Terrasse du voyageur ny hetsika, rahampitso. Ho an’ny alatsinainy 3 septambra sy ny talata 4 septambra kosa, hibahan-toerana ny atrikasa fiofanana, tarihin’ireo artista vahinin’ny « festival ». Raha tsiahivina, mizara roa hatrany ny fandaharam-potoana, mandritra ny « i’Trôtra » : ny fiofanana ho an’ny sokajy samihafa ary ny fampisehoana, ahitana ny fandraisana anjaran’ny kaompania avy any ivelany sy ny avy eto an-toerana.